Ny tsara ho fantatra momba ny code morse: teknolojian’ny taonjato faha-XIX - Tily eto Madagasikara
Datin'ny lahatsoratra 7 mai 2021
Raha vao miresaka teknika fampitan-kafatra dia « morse » no tonga voalohany ao an-tsaina. Teknika nanana ny maha-izy azy mihitsy ny morse nandritra ny taonjato faha-XIX sy ny fiandohan’ny taonjato faha-XX rehefa niroborobo ny fifandraisana tamin’ny alalan’ny telegraphe. Ny skoto no anisan’ny tena nampiasa io teknolojia io ary nalaza tamin’ny fifehezana azy, ankoatra ireo nampiasa azy tamin’ny sehatry ny asa. Na efa tsy fampiasa firy intsony aza ny morse amin’izao vanim-potoana izao, noho ny fisian’ny teknolojia maro mahasolo azy dia mbola misy ny sehatra sy vondron’olona mbola mianatra sy mampiasa azy.
Inona ny code morse ?
I Samuel Morse no voalaza fa namorona ny code morse intamin’ny taona 1832 mba ho ampiasaina hampitana hafatra amin’ny alalan’ny telegraphe. Nohatsarain’i Friedrich Clemens Gerke tamin’ny taona 1838 ka izay no nahazoana ny « Code morse International » araka ny fampiasantsika amin’izao fotoana izao. Nanomboka tena niroborobo tanteraka izy teo ho eo amin’ny taona 1866 teo (nahatafapetraka fifandraisana an-telegraphe teo amin’ny amerika sy europe) … 10 taona teo ho eo i BiPi tamin’izany.
Fitambarana signal fohy (teboka) sy lava kokoa (tiret) mampiavaka ny litera tsirairay ny morse. Io fahatsorany io no tena nampalaza azy vetivety satria ankoatra ny fampiasana azy amin’ny telegraphe dia azo hampitàna morse avokoa rehefa fomba ahafahana mandefa signal fohy sy lava : hazavana, feo, soratra, loko, fihetsika, …
Mbola misy mampiasa morse ve amin’izao ?
Efa tsy fampiasa andavanandro toy ny tamin’ny fotoanan’ny telegraphe intsony ny morse satria efa nahasolo azy tanteraka ny finday sy ny internet. Mbola misy kosa nefa ny mianatra azy any amin’ny sehatra sarotra hifandraisana toy ny miaramila, ny taranjam-panatanjahan-tena sasany (ohatra : ny mpananika tendrombohitra na ny mpanao ankilentika). Ary misy ny mampiasa azy ho fialam-boly sy fampivelarana hakingan-tsaina, toy ny skoto sy ny mpankafy radioamateur.
Ireto koa nefa misy ohatra fampiasana ny morse tamin’ny fomba miavaka :
Morse ny sonnerie tamin’ny Nokia
Ranga avy hatrany ny sofin’ny skoto vao maneno ny sonnerie an’ny Nokia. Hay kay SMS fa tsy SOS.
Niantso vonjy tamin’ny maso
Ny taona 1965, nandritra ny ady tany Vietnam, dia babo an’ady i Jeremiah Denton, miaramila amerikanina. Noterena hanao interview tamin’ny fahitalavitra izy. Nandritra izany dia sady mamaly ireo fanontaniana napetraka taminy izy no manakipikipy maso mandefa morse hoe « T-O-R-T-U-R-E » (Ampijaliana izahay). Jereo anie e :
Teknika fianarana code morse
Misy maro ny fomba fianarana Morse fa anisan’ny iray amin’ireo fotsiny ny tabilao TMOCH-EISH zaraina eto.
Ary amin’izao fotoana izao ?
Anisan’ny lalao manampy amin’ny fampivelarana ny hakingan-tsaina ny lalao fampitan-kafatra. Fa ny tena tsy tokony ho adinoina dia ity : nifehy morse ny skoto tamin’ny andron’i BiPi satria ny morse sy ny telegraphe no teknolojiam-pifandraisana avo lenta indrindra tamin’izany fotoana izany.
Ary amin’izao fotoana izao ? Ankoatra ny morse, ise na ny skoto tarihin’ise ve mahafehy tsara ny fampiasana email ? Mahay manavaka tsara ny vaovao mari-pototra sy ny tsaho amin’ny Google sy Facebook ? Mahay base-na programmation ?
← Fombam-pivavahana amin’ny fotoana samihafa → Mirotsaka mavitrika ho amin’ny fandrosoana lovainjafy ny Tily